Top 6 iPhone Explorer u Mac iyo Windows PC
iPhone bixiyaa qadar weyn ee awoodda kaydinta, laga bilaabo 16GB in 64GB, dadka isticmaala ay. Sidaas waxa loo isticmaali karaa sida disk adag saari karo in uu kaydiyo faylasha aad muhiim u ah in aad qaadi karaan meel kasta oo aad rabto. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad ka arki kartaa oo dhan fayl marka aad iPhone xidhmaan your computer. Waa xannibaad ah hirgelinaayo Apple ay maktabadda maamulka warbaahinta via - Lugood, taas oo kaliya u oggolaanaysa in qaar ka mid ah files in la beehsa leh qalabka. Haddaba su'aashu waxay baxdo, sida aan ku hayn kartaa faylasha in uma lihin qalabka?
Waa halka iPhone Explorer ka yimaadaa. qalabka software sahamisa iPhone talaabo si wax looga qabto dhibaatadan. Guud ahaan, hawlaha iPhone Explorer badan ama ka yar sida Lugood, kuu oggolaadaan in aad wareejiso files si iPhone. Laakiin waxaa kale oo la Timaadda muuqaalada awood badan ha aad maamuli files kala duwan ee iPhone. Taas macnaheedu waxa weeye noocyada file sida video, music iyo codsiyada la raadsan karaa qalabka. Waxaa sidoo kale ka dhigan tahay in files si caadi ah u aqoonsan Lugood laga saari karo waxaa ujeedooyin kaydinta. Si aad u kaydiso files in Lugood ma ogolaan ha, kaliya faylka jiidi ka your computer si aad qalab la isticmaalayo sahamisa iPhone. In shaxdan, waxaa jira Top 6 iPhone Explorer qalab laga yaabaa in aad xiisaynayso in:
Top 6 iPhone Explorer u Mac iyo Windows PC! Dooro Explorer iPhone Taasi waa xaq In Aad Hesho!
Features u iPhone Explorer
Bedelka music ka iPhone in Lugood
Ka iPhone dhoofinta Music in computer
Messages Dhoofinta ka iPhone
Xiriirada Dhoofinta ka iPhone
Maamul songs, videos, iyo sawiro ku iPhone
Taageerada iPhone / iPod / iPad
iExplorer waa tababare iPhone ah ee ay soo Macroplant. Available in saddex nooc oo kala ah Basic, Tafaariiqda iyo Ultimate; waxaa loo isticmaali karaa iPhone, iPad iyo iPod. Iyada oo taageero ka waxa aad si fudud music ka qalab kasta Apple inay Mac ama computer PC iyo Lugood wareejin karaan. Waxaad dhoofin karo fariimaha sida fariimahu iyo iMessages oo ku lifaaqan oo kale si aad u computer. Helaan sawiro, videos iyo faylasha kale si fudud iyadoo la kaashanayo software this. Waxa kale oo aad samayn kartaa gurmad ah ee aad xiriirada, voicemails, xusuusinta iyo iyo qoraalo kale.
Platform: Available ama Mac iyo Windows
Wondershare TunesGo oggolaanaysa in aad maamulato wax kasta oo aad iPhone, iPad ama iPod. Wax soo saarka waxa laga heli karaa hal iyo sidoo kale pack multi-liisanka. Haddii aad ka ayaa laga badiyay oo dhan music, maxaa yeelay nidaam dib ama shil Lugood ama aad rabtid in aad dhaqaajiso playlist in computer cusub, alaabta aad ka caawisaa in sidaas la sameeyo iyo waa ay fududahay in ay la tacaalaan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud music, video, playlists, Podcast, Lugood U wareejiyo ka iPod, iPhone iyo iPad dib ugu Lugood iyo xog dheeraad ah, sida sawiro, xiriirada iyo SMS, si aad u computer. Qaybta ugu fiican waa in aad ku xidhan karto iDevices duwan ee hal mar oo aadan u baahan in si joogta ah u hagaagsan oo dhan waxay u Lugood. Waxaad si toos ah wareejin karaan faylasha u dhexeeya iPhone, iPad ama iPod kaliya click ah.
Platform: Available Wixii Mac iyo Windows
DiskAid waa Explorer ah iPhone File badan loo sheegay in loo isticmaali karaa iPhone, iPad iyo iPod. The sahamisa kala iibsiga file hore Wi-Fi oo USB, waa labada diyaar u Windows iyo Mac 10 luqadood oo kala duwan. Waxaad ka mid iPhone, iPad iPod ama wareejin karaan music video iyo daafaca midig maktabadda Lugood ama meel kasta oo kombiyuutarka. Waxa kale oo ay ku wareejinaya fariimaha qoraalka (SMS), xiriirada, qoraalo, farriinta-codka si computer. Waxay ku siisaa xoriyad buuxda qalab samaynta aad iPhone qalabka la qaadi karo kaydinta tiro ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa oo files helaan kaydiyaa iCloud oo Photo Stream ka Mac la DiskAid. Oo wax ugu fiican yahay waa lacag la'aan.
iFunBox waa mid ka mid ah Tababaraha file ugu isticmaalay oo lagala soo bixi heli iPhone, iPad iyo iPod Touch. Iyada oo taageero ka tan waxa aad maamuli kartaa files qalabka sida Windows faylkaaga Explorer aad kombuutarka, ka faa'iidaystaan ​​kaydinta qalabka iyo u isticmaal sida disk la qaadan karo USB, iyo soo dejinta / music dhoofinta, video, sawir files dadaal lahayn. Laakiin dadka isticmaala inta badan waxay isticmaalaan ka dib markii jailbreaking. Haddii aad sii socotay inay u isticmaalaan si ay u gudbiyaan music dhexeeya Lugood iyo iPhone, tani ma aha mid sidaa u caqli badan.
Senuti waa fudud iPhone Explorer loo isticmaalo heeso ka iPod ama iPhone wareejiyo si aad u computer dib. Waxaad ka raadin kartaa oo ku kala soocaan heesaha oo isku dhafan kasta oo aad rabto. Waxay kaa caawinaysaa in aad aqriso playlists in aad sameeyey aad iPod iyo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad dib u sidoo kale lagu wareejiyo si aad u computer. Jiididda iyo dhibic tallaabo A fudud gudahood codsiga nuqul doonnaa gabayadayda si aad u computer iyo iyaga iyo sidoo daro in Lugood.
File sahamisa kale iPhone waa SharePod. Waxaa sidoo kale ay leedahay Macroplant. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad nuqul ka songs, videos, podcasts iyo wax ka badan ka wax iPhone, iPad ama iPod in computer PC aad iyo Lugood. Waxaad wadaagi karaa ama nuqul kasta oo playlist Lugood iyo sidoo kale soo kabsado maktabadda music aad haddii aad lahayd shil kombiyuutarka.
> Resource > iPhone > Top 6 iPhone Explorer u Mac iyo Windows PC aad kala dooran karto